यी उपाय उच्च रक्तचापमा औषधिको विकल्प बन्न सक्छ– डा अनिल – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/यी उपाय उच्च रक्तचापमा औषधिको विकल्प बन्न सक्छ– डा अनिल
उच्च रक्तचापमा औषधिको प्रयोग जुनसुकै व्यक्तिका लागि पनि सहजै स्वीकार्य हुँदैन । यसका कारणहरूमध्ये औषधिको साइड इफेक्टको डर, लामो समयसम्म निरन्तर प्रयोग गर्ने झन्झट, आर्थिक भार, बानी पर्ने डर, अरूले के भन्ला भन्ने पीर आदि प्रमुख मानिन्छन् ।
औषधि खाने वा नखाने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुइटा कुरामा होश पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । पहिलो, अहिले नै औषधि खानुपर्ने भइसकेको हो कि होइन ? दोस्रो, के म जीवनशैली र अन्य माध्यमले रक्तचापलाई निरन्तर नियन्त्रणमा राख्न सक्छु ? पहिलो प्रश्नको उत्तर डाक्टरले विभिन्न जाँचको आधारमा दिन सक्छ भने दोस्रो बिरामीको अनुशासन र आत्मविश्वासमा भर पर्छ ।
डाक्टरसंँगको पहिलो भेटमै औषधि खानुपर्ने अवस्था (जस्तै : मुटु/मृगौला/मस्तिष्कमा असर देखिनु, अत्यधिक रक्तचाप, कुनै अंगबाट रक्तस्राव) भइसकेको छैन भने जुनसकै व्यक्तिले ३–६ महिनासम्ममा जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर रक्तचापको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।
तैपनि नियन्त्रण नभएमा औषधि खानु राम्रो हुन्छ । संसारभरिमा १०० करोडभन्दा बढी व्यक्तिको रक्तचाप नियन्त्रणमा नभएको कारणले नै हो, सबभन्दा बढी मानिसको मृत्युको कारण उच्च रक्तचाप बनेको हो । उच्च रक्तचाप आफैंमा प्राणघातक रोग होइन, तर यसको समयमै पहिचान, उचित उपचार र रोकथाम नभएर मात्र यो ठूलो जनस्वास्थ्य समस्या बनेको हो ।
रक्तचाप उमेरसँगै बढ्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । ५० वर्ष माथिका अधिकांशको रक्तचाप सामान्य हुँदैन । अस्वस्थ जीवनशैली, बढ्दो मानसिक तनाव, मदिरा, चुरोटको सेवन, प्रदूषण आदिको कारणले उच्च रक्तचाप सबैलाई हुनु आजको परिवेशमा सामान्य प्रक्रिया भैसक्यो । त्यसैले रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न औषधिको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । औषधि नखाएर असामयिक मुटु/मस्तिष्क/मृगौला रोगी बन्नुभन्दा औषधि खानुमा दोस्रो राय नहुन सक्छ । तर प्रत्येकले औषधि बाहेकका उपायहरूमा जोड दिएर औषधि खानै नपर्ने, सुरु गरिसकेपछि मात्रा घटाउने वा बन्दै गर्न सक्षम पनि हुनसक्छन् । सामान्य रक्तचाप, उच्च रक्तचाप र औषधिको सेवन गर्ने सबैले यी ५ उपायहरू अवलम्बन गरेमा फाइदा निश्चित हुन्छ ।
१. दैनिक १ घन्टा हिँड्नु
उच्च रक्तचाप त कुनै न कुनै दिन हामी सबैलाई हुन्छ नै, उमेरसँग रक्तचाप बढ्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन ल्याएमा रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । औषधिको प्रयोग समयमै गरेर, माथि उल्लेखित उपायहरू अपनाएमा औषधिको मात्रा घटाउन सजिलो हुन्छ । पछि रक्तचापमा राम्रो सुधार देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि बन्दसमेत गर्न मिल्छ ।